के कारणले हुन्छ यौनसम्पर्क पछि तनाव ? – SatyaPatrika
सामान्यतयाः अविवाहित जोडी तथा मल्टि पार्टनर हुने अधिकांश व्यक्तिमा यौनसम्पर्कपछि मानसिक तनाव हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कायम राख्ने शारीरिक सम्बन्ध उनीहरुमाथि नै मानसिक रुपमा हावी भइदिन्छ । जसकारण उनीहरु थुप्रैै मानसिक तनाव, चिन्ता र आत्मग्लानीको महशुस गर्छन् । यद्यपि व्यक्तिमा आउने यस्तो सोचलाई भने स्वाभाविक मानिन्छ । तर, यसलाई आफूमा पुर्णरुपमा हावी हुन भने दिनु हुँदैन । भनेपछि यस्ता सोचलाई कसरी कम गर्ने त? अर्थात् यसको नियन्त्रणका उपाय के हुन सक्छ त?
‘पोस्ट–कोइटल डिस्फोरिया’ अर्थात् सहवासपछि हुने असहजपन । यसलाई पोस्टकोइटल ‘ट्रिस्टेस’ या सहवासपछि हुने उदासीपन पनि भनिन्छ । यसले एक किसिमको चिन्ता उत्पन्न गर्छ । सन् २०१५ मा गरिएको २ सय ३३ छात्रामा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार, उनीहरुमध्ये ४६ प्रतिशतमा पिसिडि देखिएको थियो भने, सन् २०१९ मा छात्रमा गरिएको सर्वेक्षणमा ४१ प्रतिशतले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै क्रममा पिसिडिको महशुस गरेका थिए । जसअन्र्तगत सम्भोग कायम भएपछि व्यक्तिहरु चिन्तित रहने, आवेशमा आउने, व्याकुल हुने र रुने गर्छन् । यौन सुख प्राप्त गरे या नगरेपनि व्यक्तिमा यो सम्बन्ध कायम भएपछि ५ मिनेट, २ घन्टा या जुनसुकैै समयमा पनि हुनसक्छ।
१ सम्भोगपछि शरीरमा उत्पादन हुने विभिन्न हार्माेनको प्रतिकृया,
जब तपाई आत्तिनुहुन्छ या डर, चिन्तामा हुनुहुन्छ तब लामो र गहिरो श्वास लिनुहोस् । यदि तपाईलाई श्वासप्रश्वास सम्बन्धिका व्यायामहरु थाहा छ भने त्यो पनि गर्न सकिनेछ । यसले मतिष्कमा चलिरहेको त्यस्ता नकरात्मक सोचहरुलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । यस्तै, जब तपाईको दिमागमा केहि नकरात्मक सोच एवम् घटनाको सोचले बारम्बार पिडा दिइरहन्छ या त्यस्ता कुरा याद आइरहन्छ । त्यस्तो समयमा वर्तमान समयमा ध्यान दिएर आफूलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
जस्तो उदाहरणका लागिः तपाईको अगाडि ३ वटा वस्तु जे छ त्यसको नाम लिनुहोस् । त्यसपछि तपाईले सुन्नुभएको ३ वटा वस्तुको नाम लिनुहोस् र अन्त्यमा आफ्नो शरीरको ३ अंगहरु चलाउनुहोस् । र, आफूलाई त्यस्ता सोचबाट राहत दिलाउने अर्काे उपाय भनेको वर्तमानमा भएको आफूलाई फोकस गर्नुहोस् र प्रश्नोत्तर गर्नुहोस् जस्तै:- आफैले आफैसँग के म सुरक्षित छु?, अहिले के भइरहेको छ?, अहिले मैले के गर्नुपर्छ? र म कहाँ हुनु पर्ने हो? के मेरो पार्टनरले मलाई यसमा मद्दत गर्न सक्छ? यस्ता प्रश्नोत्तरपछि यदि तपाईलाई आफ्नो पार्टनरलाई यो सब बताउनुपर्छ जस्तो लागछ र तपाई बताउन पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्ना पाटनरसँगको साझेदारीमा पनि यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ । कहिलेकाँहि आफ्ना भावहरु कोहि दोस्रो व्यक्तिसंग सेयर गर्दा यसले पनि व्यक्तिलाई धेरै राहत दिन्छ । तर, यदि तपाई आफ्नो पिडा र गोप्यनीयता कसैसँग बाड्न चाहानुहुन्न भने तपाई नबताउन पनि सक्नुहुन्छ । एकचोटि तपाई यस चिन्ताबाट मुक्त हुनुभयो भने पुनः सोहि क्रम नदोहोरियोस् भन्नका लागि तपाईे निम्न प्रश्न आफैमा गर्नुहोस्ः
सम्भोगपछि पैदा हुने मानसिक तनाव अस्वभाविक होइन । यस्ता भाव पैदा हुनु जायज पनि छ । यद्यपि यस्ता भावले नियमित सताउन थालेमा भने थेरापिस्ट एवम् सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु उचित रहन्छ । उनीहरुले तपाईलाई यस्ता अनावश्यक सोचाईबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नेछन् । -एजेन्सी
कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्यो भारत